पशुपतिनाथले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, २०७७ ज्येष्ठ २५ गते देखी ज्येष्ठ ३१ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल !! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Horoscope/पशुपतिनाथले सबैको मनोकामना पुरा गरुन, २०७७ ज्येष्ठ २५ गते देखी ज्येष्ठ ३१ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल !!
तुला राशि (र, रि, रु, रे, रो, ता, ति, तु, ते) साताको सुरुमा खर्च बढ्ने सम्भाबना रहेको छ । कुराकाट्ने हरुको बृद्धि हुनेछ । नजिकका मित्र बाट धोका हुन सक्छ । प्रेमी प्रेमीका बिच मनमुटाब रहन सक्छ । ब्यापार ब्यवसाय बाट राम्रो आम्दानि हुने योग रहेको छ । कार्यक्षेत्रमा लगाईएको लगानीको प्रति फल प्राप्तनहुदा मनमा खिन्नता उत्पन्न हुन सक्नेछ । बोलिको खराब अर्थ लाग्नाले सामान्य झन्झट आईपर्ला । बौधिक ब्यक्तित्वहरुको सहयोगले कार्य सम्पादनमा बिशेष फाईदा हुनेछ । शा रीरिक आलस्यले सताउन सक्छ । मित्रजनको सहयोग प्राप्त हुनेछ । कार्य कुसलताले मान्यजनको मन जित्न सफल रहने योग रहेको छ । साताको अन्त्यमा भौतिक शुःख साधनको क्षेत्रमा समय ब्यतित हुनेछ । ईष्टमित्र सगँको सम्बन्धमा सुधार आउनेछ । साधारण खर्च भएतापनि दिन मध्यम रहनेछ । पारीबारिक साथ सहयोग प्राप्त हुनाले कार्य सम्पादनमा सहयोग पुग्नेछ ।